विर्खेकी नायिका आयुषा राईलाई निर्देशक मुनाल शिशिरको यौन प्रस्ताव ? | EuropeNepal.Net
विर्खेकी नायिका आयुषा राईलाई निर्देशक मुनाल शिशिरको यौन प्रस्ताव ?
00Europe Nepal Thursday, January 8, 2015
actress-aayusa-rai-facebook-deliberation-by-the-public-she-is-sexually-suggestive-director-munalshishir-koirala,Actress Aayusa Rai Facebook deliberation by the public she is sexually suggestive director Munalshishir Koirala
Actress Aayusa Rai Facebook deliberation by the public she is sexually suggestive director Munalshishir Koirala
चलचित्र ‘बिर्खेलाई चिन्छस्’बाट डेब्यु गरेकी अभिनेत्री तथा मोडल आयुषा राईले भिडियो निर्देशक मुनाल शिशिर कोइरालाले आफूलाई यौन प्रस्ताव राखेको खुलासा गरेकी छिन् । अभिनेत्री राईले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक प्रोफाइलबाट यो रहस्य खुलासा गरेकी हुन् ।
३ महिनामा नेपालको टप अभिनेत्री बनाइदिन्छु भन्दै आफूसग सबै कुरा गर्नुपर्छ भन्दै मुनालले प्रस्ताव राखेको अभिनेत्री आयुषाले फेसुबक मार्फत सार्वजनिक गरेकी छिन् । आयुषाले आफूलाई मुनालले विस्तारमा एकसाथ सुत्नु पर्ने अफर गरेको समेत लेखेकी छिन् । मुनालले आफूलाई म्यासेजमा मात्र नभएर प्रत्यक्ष भेट्दा नै यौन सम्पर्कको अफर गरेको भन्दै आयुषाले दिमाग नभएको मानिसलाई आफूले कुनै जवाफ नदिएको फेसबुकमा लेखेकी छिन् ।
त्यस्तै अभिनेत्री राईले मुनालको बारेमा लेख्दै काममा पनि कसैलाई इज्जत नगर्ने आरोप लगाएकी छिन् । आफूले आज भिडियोमा अभिनय गरेको पारिश्रमिक लिन भेट्दा मुनालले यस्तो प्रस्ताव गरेको आयुषाले फेबुकमा लेखेकी छिन् ।
आयुषाको स्टाटसमा कमेन्ट गर्दै मुनालले यस्तो कुरा कहाबाट आयो भनेका छन् । उनले यस्ता कुरा मलाई नै किन आउछ भन्दै कमेन्ट लेखेका छन् । उनले यौन सम्पर्कको प्रस्तव राखेको अस्विकार गरेपनि च्याटमा देखिएको कुराले भने अप्रत्यक्ष रुपमा यौन सम्पर्कको प्रस्ताव राखेको प्रस्टिन्छ । उता फेसबुकमा यो स्टाटस अपलोड भइसकेपछी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टिव्टरमा भाइरल बनेको छ । अभिनेत्री आयुषा राईले नेपाली कला क्षेत्रलाई हिंसा मुक्त बनाउन आफुले पहल गरेको बताएकि छिन् । उता अभिनेत्री आयुषालाई यस किसिमको प्रस्तावलाई बाहिर ल्याएपछि एउटा साहसि अभिनेत्रीको रुपमा बधाइ दिइरहेको छ ।
आयुषाको स्टाटसमा कमेन्ट गर्दै मुनालले यस्तो कुरा कहाबाट आयो भनेका छन् । उनले यस्ता कुरा मलाई नै किन आउछ भन्दै कमेन्ट लेखेका छन् । उनले यौन सम्पर्कको प्रस्तव राखेको अस्विकार गरेपनि च्याटमा देखिएको कुराले भने अप्रत्यक्ष रुपमा यौन सम्पर्कको प्रस्ताव राखेको प्रस्टिन्छ । उता फेसबुकमा यो स्टाटस अपलोड भइसकेपछी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टिव्टरमा भाइरल बनेको छ । अभिनेत्री आयुषा राईले नेपाली कला क्षेत्रलाई हिंसा मुक्त बनाउन आफुले पहल गरेको बताएकि छिन् । उता अभिनेत्री आयुषालाई यस किसिमको प्रस्तावलाई बाहिर ल्याएपछि एउटा साहसि अभिनेत्रीको रुपमा बधाइ दिइरहेको छ । -
यौन सम्पर्कको प्रस्तव च्याटमा (म्यासेज तलमाथि परेको हुन सक्छ मिलाएर पढ्नुहोस्)
EuropeNepal.Net: विर्खेकी नायिका आयुषा राईलाई निर्देशक मुनाल शिशिरको यौन प्रस्ताव ?